အသက် ၃၁ နှစ် - PMO ကိုမရပ်တန့်ခင်မှာတောင်ကျွန်တော်မတက်နိုင်ခဲ့ဘူး - လိင်ဟာဒုတိယအလုပ်ဖြစ်တဲ့ Your Brain On Porn လိုပဲ
ငါ 10 သို့မဟုတ် 11 (ပင်ထို့နောက် ejaculate နိုင်ဘူး) အကြောင်းကိုခဲ့ကတည်းကငါ masturbating ခဲ့ကြရတယ်။ ကျွန်မဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဖွစျလာတဲ့အခါဒါဟာ dial-up အင်တာနက်ရရှိနိုင်ဖြစ်လာတာပါပဲ။
ငါဖြည်းဖြည်းကို download လုပ်ပါမယ်လို့ငါလုံးဝ screen ပေါ်မှာမြင်စေမယ့်တဦးတည်းရုပ်ပုံဘို့အကြောင်းကို3မိနစ်စောင့်ဆိုင်းမယ်လို့ porn မှ masturbating မှတ်မိလိမ့်မယ်။ မကြာခင်မှာပဲသောနောက်, မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက် ထွက်. ငါပိုက်ကွန်အပေါ်ရှာတှေ့နိုငျသောအရာကိုနှင့်အတူလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ အဖြစ်မကြာမီငါရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းရှုမြင်မယ်လို့သကဲ့သို့, ကမ်ဘာပျေါတှငျအဘယ်အရာကိုမျှ, ငါ့ဘောင်းဘီကျဆင်းနေကရိုက်နှက်နှင့်ဤ 6-7 ကြိမ်တစ်နေ့လျှင်မှတက်ပြုသောအမှုနိုင်မှငါ့ကိုကိုရပ်တန့်လိမ့်မယ်။
အချိန်ပေါ်သွားငါသည်ကိုယ်နဲ့အတူမလုံခြုံမှုတစ်အသိခံစားရတယ်။ အစဉ်မပြတ်ငါလူတို့သည်ငါ့အကြောင်းပြောနေတာများနှင့်အဆက်မပြတ်ကိုယ်အကြောင်းကိုအနုတ်လက္ခဏာအမှုအရာအတည်ပြုကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံး၏နောက်ကျော၌ငါ့ကိုစကားပြောနေတာကဒီအတွင်းစိတ်စကားသံကိုရှိကွောငျးကိုခံခဲ့ရသလိုခံစားရတယ်တူသောဒါဟာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအိပ်မက်ဆိုးဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါတကယ်ငါဘဝ၌ဤဝေးဖန်ဆင်းပုံကိုမသိကြပါ။ ငါကသန့်စင်သောဇွဲကြီးနဲ့ကျွန်မအမှုအရာပိုကောင်းရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ချက်အချို့ကိုကြင်နာခဲ့ပေမယ့်ငါတကယ်ငါနှင့်အတူအတာမှားခဲ့သောအရာကိုမသိကြောင်းခန့်မှန်း။
20 ရဲ့ (အခု 30 ဖြစ်ကြောင်းကို) နှင့်ငါခိုင်မြဲစွာငါမိန်းကလေးများနှင့်အတူတကယ်ကောင်းသောဘယ်တော့မှကြီးနဲ့ကျွန်မတော်တော်ရှက်သောကြောင့်ဤအမှုသည်ငါ့ Self-image ကိုအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းယုံကြည် - ငါ့ porn အသုံးပြုမှုကိုငါ့အ 31 ရဲ့ကာလအတွင်းဆိုးရွားလာခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ့ကောလိပ်ရက်ပေါင်းစဉ်အတွင်းမမြင်ရတဲ့ခဲ့ကြောင်းကျိန်ဆို။ ငါဘယ်သူမှတောင်ငါလှည့်ပတ်ခဲ့သိကြလိမ့်မယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုလို။ အချို့သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကိုကျိန်းသေရှိခဲ့သည်။ ငါသည်လည်းတစ်ခုထွက်ပေါက်အဖြစ် porn ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ ငါနေ့တိုင်း 2-3 ကြိမ်လှည့်ပတ်အချို့တော်တော်စက်ဆုတ်ဘွယ်ဖြစ်သောညစ်ညမ်းမှ masturbate လိမ့်မယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မဘဝကိုပျက်စီးဘယ်လောက်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေရချင်ကြပါဘူး။ PMO ကနေရလဒ်သောငါ၏ဘဝကိုတခြားအပျက်သဘောအကျိုးဆက်များနှင့်ပင်အခြေအနေများအများကြီးရှိပါတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်နှင့်ရှိကိုယျ့ကိုယျကိုဖူးကိုငါသိ၏။ သို့သျောလညျးအကြှနျုပျ၏အမှုကျေးဇူးတင်စကားနှင့်ဂယ်ရီ Wilson က, သူ့ဇနီးနဲ့သူ့ website မှာ Yourbrainonporn.com များအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပိုတစ်ခုစကားရပ်ပါဝငျသညျ။ အဘယ်သို့ငါဆိုလိုကျနော်တို့ကသူ့က်ဘ်ဆိုက်အတွက်နောက်ဆုံးမှာ porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတဲ့ရောဂါလူသားတစ်ဦးဖြစ်ခြင်းဖျက်ဆီးတဲ့လမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းလျော့နည်းသွားစေမယ့်သဘောပေါက်ဖန်တီးခြင်းအတွက်သူ့ကိုနှင့်သူ၏လုံ့လဝီရိယသုတေသနနှင့်အလုပ်ကြိုးစားမှုများအတွက်အစွမ်းကုန်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပေးသင့်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သူ့အဘို့မဟုတ်ခဲ့လျှင်, ငါအမှန် "NoFap" လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ် PMO ရှောင်၏အခြားမည်သည့်ပုံစံကိုမွေးဖွားခဲ့ကြမဟုတ်ပါသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအဖြစ်ကြီးတွေဖြစ်မတုန်းပဲမှောင်မိုက်၌နထေိုငျကျွန်တော်တို့ကိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏အဲဒီမှာပါလိမ့်မယ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ် ။
ငါသည်သူ၏ဘ်ဆိုဒ်ကိုဖြတ်ပြီးသို့မရောက်မှီတိုင်အောင်ဒါဟာငါ PMO ဒဏ်ငွေဖြစ်ပါသည်လူတိုင်းကမထင်မဖြစ်ခဲ့သည်။ အစဉ်မပြတ်ငါ PMO ငါ့ထံသို့ထိခိုက်ခဲ့ပေမယ့်ငါထူးဆန်းဘာသာရပ် browsing ခဲ့သည်သည်အထိငါဂုဏ်ထူးအောင်တကယ်တတ်နိုင်ဘယ်တော့မှကြီးကံကောင်းတာ yourbrainonporn.com ဖြတ်ပြီးလဲတတ်သောတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းရှိစေခြင်းငှါ, စဉ်းစားမိတယ်။ ငါသည်ငါ၏အသက်နှင့်တစ်စုံတစ်ဦး၏အများဆုံးများအတွက်လှောင်အိမ်တှငျနထေိုငျခဲ့သညျနှငျ့တူအဲဒီအချိန်တုန်းကငါလာနဲ့တံခါးကိုဖွင့်လှစ်မယ့်ရုတ်တရက်ခံစားရတယ်။ ငါစာသားလွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။ အဖြစ်မကြာမီငါ website တွင်အရင်းအမြစ်များအများစု (ဥပမာဗီဒီယို) ကိုလေ့လာသကဲ့သို့ငါကအတိတ်ထဲမှာငါ့အဘို့စေသောအပေါငျးတို့သဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများထည့်သွင်းစဉ်းစား porn မှ masturbating တော့ဘူး။
ပြန်လည်နာလန်ထူ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ငါ 73 ရက်ပေါင်းခက်ခဲ mode ကိုမ PMO သွားလေ၏ (ကျနော်သည်လည်းဤသည်နေ့ရက်ကာလအများစုများအတွက် flatline တွေ့ကြုံခံစားင့်) နှင့်ထို့နောက်တစ်ရက်တစ်အိပ်မက်ဆိုးအပေါ်ပြန်ရောက်သွားတယ်။ ငါ relapsing နှင့်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်အဖြစ်ငါမတိုင်မီခံစားခဲ့ရဖူးပါဘူးငါ့ဦးနှောက်ထဲမှာအာရုံခံစားခဲ့ရသည်။ ဒါဟာငါ့ဦးခေါင်းသည်ခုနှစ်ဆုံလည်အချို့ "ငြိမ်" ခံစားချက်တူ၏။ ဒါဟာစိတ်အသံပေမယ့်ငါလှညျ့မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ငါကဂယ်ရီ Wilson က dopamine နဲ့ neuro-plasticity နှင့်ဦးနှောက်၏ Re-ဝါယာကြိုးအကြောင်းကိုရှင်းပြခဲ့ရာနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ယုံကြည်မိပါတယ်။ ဒါဟာ weirdest အရာကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်ငါပြုလိုက်ပြီးနောက်ရွံရှာ၏အခြားခံစားမှုကျော်တို့သည် လာ. ငါအမှိုက်သရိုက်နဲ့တူသလိုခံစားရတယ်။
ထိုအချိန်မှစ. ကျွန်မအသစ်တစ်ခုလူ့ဖြစ်လျက်ရှိတူခံစား (ပျော့ mode ကို) 125 ရက်ပေါင်းမှာလုံးဝယခုအခါရပ်တန့်ပါပြီ။ မယားနှင့်အတူဆက်ဆံရေးကိုလည်းယခုငါ၏အစိုက်ထူမှသာထိသို့မဟုတ်နမ်းနဲ့အတူရော့ခ်အစိုင်အခဲဖြစ်ကြပြီးငါတောင်အစဉ်အဆက်အစဉ်အဆက်မဆိုမိန်းကလေးနှင့်အတူဖြစ်ပျက်ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့မ (လုနီးပါးကွာရှင်းတက်အဆုံးသတ်နှင့်သူ့ဟာသူအတွက်အခြားဇာတ်လမ်းဖြစ်သည့်) တိုးတက်ခဲ့သည်။ ငါ PMO ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်လိင်ငါ့ထံသို့တစ်စက္ကန့်ကိုအလုပ်နှင့်တူသလိုပဲရှေ့၌ငါပင်မှာအားလုံးကတက်မရနိုင်ဘူး။ အခုတော့ငါကမျှော်လင့်နေပါတယ်။
ငါစသည်တို့ကို, တိုးမြှင့်စွမ်းအင်ကဲ့သို့အဖိုရမ်များအပေါ် posted, ယုံကြည်မှုပိုမိုလူမှုရေး, ပိုပြီးအမှုအရာခံစားကြည့်ပါသမျှသောအကြိုးခံစားခှငျ့ငါအသီးအနှံကိုရိတ်ရသောသူအပေါင်းတို့သည်အရာဖြစ်ကြ၏။ မသာကားငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတအကြောင်းကိုအခုအသစ်တွေ့ရှိရအလိုဆန္ဒရှိသည်။ ငါနေ့တိုင်းတွေးတောဆင်ခြင်ပါ။ ငါနဲ့တူစာအုပ်တွေဖတ်နေပါတယ် သို့အနည်းငယ်ကွေ့ Edge, Rich စဉ်းစားပါနဲ့တိုးတက်ကြီးပွားခြင်း (အရာအစဉ်အဆက်တိကျမ်းစာ၌လာသည်ကိုအကောင်းဆုံးစာအုပ်တွေတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ transmutation တခုတခုအပေါ်မှာတစ်ခုလုံးကိုမျြးအခနျးကွီးရှိပါတယျ), စိတ်ခွန်အားနိုးအသံနားထောင်ခြင်းနဲ့ကျွန်မလုပ်နေတာ၏စိတ်ကူးကိုဘယ်တော့မှဖွင့်အခြားအရာလုပ်နေတာ။
ငါကပိုဘာသာရေးဖြစ်လာနှငျ့ဘုရားသခငျကိုငါ့အသက်တာသစ်အတွက်တာဝန်ရှိသည်ကြောင်းကိုငါသိ၏ပါတယ်။ ငါသည်လည်းရူးနေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်ဦးနှောက်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကနိုင်စွမ်းအတွက် ပို. ပို. စိတ်ဝင်စားဖြစ်လာသည်။ အဆိုပါစာရင်းတွင်နှင့်ပေါ်တတ်၏။ ကျွန်မစဉ်းစားသည့်အခါငါသည်ငါ့နှောင်းပိုင်းတွင်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်အခါသာငါကဒီကိုဖြတ်ပြီးလဲခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါရသောခံစားမှုစကားများမဖော်ပြနိုင်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်မကျေနပ်သည့်ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သျောလညျးပဲအခုထွက်ရှာတွေ့ငါသည်ဤစွဲလမ်းရပ်တန့်နိုင်သူအားလုံးမှထွက်ရောက်ရန်စီစဉ်ထားကြောင်းကျေးဇူးတင်တယ်။ အဘယ်အရာကိုလူတိုင်းကဒီရှည်လျားပို့စ်ကနေယူဘို့ငါချင်ပါတယ် porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုခေါ်ဤရောဂါ၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဒီလုပ်နိုင်တဲ့တစ်ခုလုံးကိုကမ္ဘာနှင့် (နောက်တဖန်ကိုယ်အသက်ကိုအတွက်ကြားဝင်သူ) ဂယ်ရီ Wilson ကများကဲ့သို့လူတို့နှင့်အတူပျံ့နှံ့ရန်လိုအပ်ပါသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ အကယ်စင်စစ်ဖြစ်နိုင်သောဖြစ်လိမ့်မည်။
ကျနော်တို့သုတေသီများဆေးလိပ်သောက်ကင်ဆာဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းသက်သေပြအဖြစ်အရေးကြီးသောအဖြစ်ဤဆက်ဆံဖို့ရှိသည်။ အဲဒီအကြောင်းအဆိုးဆုံးကတော့လူအများစုကဖြစ်စေတဲ့ထို့ကြောင့်ထိုသို့အသိအမြင်မသာကမလွှဲမရှောင်ရဲ့တစ်ဦးမဖြစ်မနေရဲ့ထိခိုက်မှု၏မသိရပါဘူးဆိုတာပါပဲ။ ကြှနျုပျတို့ပွုနိုငျသေးငယ်ဆုံးအရာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေများကိုသို့မဟုတ်ချစ်ရသူကိုပြောပြပေမယ့်တစ်ဦးအကြီးစားအခြေခံပေါ်နှင့် Nofap တူသောအသိုင်းအဝိုင်းမှတဆင့်ကျနော်တို့နောက်ဆုံးမှာ PMO ဖြစ်ပေါ်စေသည်သောအန္တရာယ်လောကီသားတို့သည်အဖို့သဘောပေါက်ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်။
LINK - မိမိအက်ဘ်ဆိုက်၏တဦးတည်းနည်းနည်းအမြင်အသက်လုံးဝပြောင်းလဲကျေးဇူးတင်စကား (ကငါ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချရှည်လျားပို့စ်ပေမယ့်တန်ဖိုးရှိ)